musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » UNWTO Inorambidza Critical Press paWorld Travel Market
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • LGBTQ • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Kudhinda kwemahara kwakakosha kunharaunda ine demokrasi. Inotsvaga uye inotenderera nhau, ruzivo, mazano, makomendi, uye maonero, uye inoita kuti avo vane masimba vazvidavirire. Mutori wenhau unopa chikuva chekuti manzwi akawanda anzwike. Panhanho dzenyika, dzedunhu, nedzemunzvimbo, ndiye mutarisiri weveruzhinji, muratidziri, uye muchengeti pamwe nemudzidzisi, muvaraidzi, uye munyori wenhoroondo wemazuva ano. Sezviri pachena vadzvinyiriri vanotya mutarisiri weruzhinji wakadaro, uye ndizvo zvakaita Munyori Mukuru weUNWTO Zurab Pololikashvili.
UNWTO isangano rakabatana neUnited Nations pasi pemutemo wenyika.
Parizvino, UNWTO ine munyori mukuru asiri pamutemo ari kutungamira sangano semudzvanyiriri. Zvinoenderana nekududzirwa kwemutemo negweta raisanganisira kugadzira marongero eUNWTO, SG Zurab Pololikashvilihe akaiswa panzvimbo chete nekunyengera. Sarudzo yekutanga muna 2018 haifanirwe kuzivikanwa.
Munyori Mukuru akakwanisa kudzivisa mibvunzo yose yakaoma yepepanhau kubvira paakatora chigaro musi waJanuary 1, 2018. Nhasi wakanga uri muenzaniso wekuti UNWTO yaizosvika papi kuti ivhare chero munhu asingabvumirani neMunyori Mukuru.
Musangano wekutanga wemakurukota kuWorld Travel Market kubva padenda, waitika nhasi muLondon paWTM World Stage paExcel Exhibition Center.
Semazuva ese, makurukota aisangana kuti vakurukure zvine chekuita neWorld Tourism Organisation uye mamiriro eindasitiri. Sezvazvaive zvakaita kubva pakagadzwa UNWTO sesangano reUN, vatori venhau vaive chikamu chevateereri, asi vaisakwanisa kubvunza mibvunzo. Pashure pekurukurirano yemushumiri, wakanga uri muitiro kuva nomusangano wevatapi venhau.
Zvese izvi zvakachinja muna Ndira 1, 2018, apo Zurab Pololikashvili akava mutariri wekushanya kwenyika.
Misangano yevatapi venhau pashoo huru dzekutengeserana kana tafura dzemakurukota hadzichaitiki. Zurab inongoonekwa chete yemafoto ops uye inonyangarika.
Munguva yese yeCCIDID-19 dambudziko, Munyori Mukuru weUNWTO akanzvenga mapepanhau ese akaomarara. Nhasi muLondon, Secretary General akaenda rimwe danho.
Kuti adzivise chero mhinduro yakaoma kana mibvunzo, akaisa nemaune vatori venhau vanonyora zvinyorwa zvakaita seizvi, eTurboNews.
Chikonzero chacho: eTurboNews vanga vachitsoropodza Secretary General.
Kudzivisa maonero asina kunaka kunonyanya kukosha nhasi, sezvo Zurab Pololikashvili ari pamusoro pechipiri chechipiri, uye kusarudzwa kwake zvakare kunoda kusimbiswa neGeneral Assembly muMadrid.
Sezvo takunda kurudziro yechipiri ne Executive Council muna Ndira nekuda kwehunyengeri hwakakura, vakwanisa kushandura nzvimbo yeGeneral Assembly kuti iite Madrid, zviri kupa mukana wakajeka wekuti Zurab asimbiswe kechipiri seUNWTO Sercterary General. kupera kwemwedzi uno. Mibvunzo yakaoma haina kumunakira.
Musangano wanhasi wemakurukota kuWTM London wanga uri wezvimwe zviitiko zvaakapinda kekutanga kubvira COVID. Aifanira kutaridzika zvakanaka mavhiki asati anzwa kusimbiswa kwake, asi akatadza kutarisana nevezvenhau.
The Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism weKenya, akarambwa neUNWTO svondo rapfuura mushure mekunge akoka General Assembly kuti iitwe kuKenya pachinzvimbo cheMadrid.
Minister Balala vanga vari muLondon nhasi kuti vapinde mumusangano wemakurukota. Akaudzwa kuti hapasisina zvigaro zvemakurukota. Akasiya chiitiko maminitsi mashoma apinda, achiudza eTurboNews muparidzi, Juergen Steinmetz, akanga akamirira pamusuo wokubuda napo.
Vese vatori venhau vaipinda WTM vaive vakagara pachiitiko ichi, kunze eTurboNews inomiririrwa naJurgen Steinmetz. Akaitwa munhu asingabvumirwi kupinda mugomo.
eTurboNews ishamwari yepamutemo yenhau yeWorld Travel Market, asi izvi hazvina kuita mutsauko. eTurboNews akatyisidzirwa nemukuru weUN paaitora vhidhiyo yechiitiko ichi.
UNWTO inoratidzika kunge inobudirira mukunzvenga kutsoropodzwa nema media makuru.
CNN semuenzaniso ishamwari yepamutemo yenhau inotambira mamirioni emadhora ekushambadza kubva kunzvimbo dzekushanya. A CNN Task Group yakaumbwa neUNWTO naAnita Mendiratta, chipangamazano wepamusoro kuMunyori Mukuru. Chinangwa cheCNN Task Group ndechekutengesa kushambadza. Iri boka rakaumbwa makore apfuura, pakutanga ne eTurboNews somubatsiri. uye zvakaita eTurboNews izvo zvakaona kusawirirana kwechido ndokusiya boka riine CNN, UNWTO, ICAO, neIATA zvasara.
Marcelo Risi, anotarisira kutaurirana kweUNWTO, akaramba kutaura naSteinmetz. Akaonekwa achitiza mamiriro ezvinhu, achiti: "Juergen, ndakabatikana."
Iyi haisi mamiriro ezvinhu anonyadzisa chete, asi kukanganisa kwakajeka kwekusununguka kwehurukuro uye nyaya yakajeka yerusarura.
Kwete chete kuti Steinmetz akamiririra eTurboNews, asi ndiye zvakare Chairman we World Tourism Network, sangano renyika dzakawanda rokushanya. Steinmetz inhengo yedare repamusoro reAfrican Tourism Board.
Akaedza kutaura nemurongi wemusangano wemakurukota, World Travel and Tourism Council (WTTC), asi vakuru vaive pamusuwo vakaramba kuti mukuru weWTTC ataure naye, vachiti havazive kuti WTTC inomira sei. nokuti.
Mumusangano mupfupi neWTTC mushure mechiitiko ichi, vatungamiriri vesangano iri havana kuudzwa zvakaitika.
Tarisa iyo iPhone vhidhiyo inoratidza mamiriro ari kuitika: